Proverbe 271 Amalon' Imoriandro aho, ka tsy hain- -jaza tsy haim- -behivavy . [Houlder 1895 #1661]
Proverbe 404 Andevolahy be lamosina , ka tsy mifidy zaza hobabena . [Veyrières 1913 #503, Cousins 1871 #173]
Proverbe 410 Andevolahy feno kibo , minia tsy handositra ; fa andevolahy noana , mitomany hamidy . [Veyrières 1913 #508]
Proverbe 415 Andevolahy mampirafy : intelo mihosina ampombo . [Cousins 1871 #182]
Proverbe 417 Andevolahy mampirafy , ka manita-draharaha . [Veyrières 1913 #515]
Proverbe 420 Andevolahy manao jirik' olona : tsy misoroka ny razana iombonana . [Veyrières 1913 #518, Cousins 1871 #186]
Proverbe 424 Andevolahy maty vady : sikajy latsaka erany no azy, ka "lanio izay ho lany ". [Houlder 1895, Veyrières 1913]
Proverbe 427 Andevolahy mianala : ka ny hazon' andriana tsy tonga, fa ny fanoto no lanjalanjaina . [Houlder 1895]
Proverbe 429 Andevolahy mielo , ka manampina ny anjara -masoandrony. [Houlder 1895]
Proverbe 431 Andevolahy mitono jabora , ka levona mbamin' ny lohaliny. [Houlder 1895 #1584, Veyrières 1913 #525, Rinara 1974 #279]
Proverbe 494 Andry ombin' ankizy , ka raha tsy afa-po mifamerina . [Rinara 1974 #247]
Proverbe 559 Ankizy lasa sakaiza , ka milalao vovoka irery. [Houlder 1895]
Interprétation malgache Enti-milaza ireo rehetra mahatsiaro ny mahasingany azy tsy eo namana , ka voatery mamalifaly ny tenany irery. [Rajemisa 1985]
Proverbe 560 Ankizy toa misy ambiny, lehibe toa tsy ampy kely, ohatra ny antitra nahazo bodokely . [Rinara 1974 #285]
Proverbe 703 Ataonao ho vilanibe manta vary angaha aho, ka hotabatabain’ ny ankizy . [Cousins 1871 #299]
Proverbe 839 Aza atao mitsoaka an-tonony ohatra ny tohi-rofian' ankizy . [Houlder 1895]
Proverbe 840 Aza atao mitsoaka an-tonony , tahaka ny tohy rofian’ ny ankizy . [Cousins 1871 #362]
Proverbe 902 Aza lozabe manana anaka , andrao tsy manan--dray ny zaza. [Houlder 1895 #1834]
Proverbe 965 Aza manao andevolahy mahay valiha : asai-manao , tsy mety ; nony tsy irahina , manao. [Cousins 1871 #417]
Proverbe 1217 Aza manao vorona azon' adala ; ka na tsy maty aza, mifohafoha volo. [Houlder 1895 #436]
Proverbe 1338 Aza miadaladala toy ny ankizy voky jabora . [Rinara 1974 #719]
Proverbe 1394 Aza mikapa sakaiza hoatry ny andevolahy homan-tain-jiro . [Veyrières 1913 #546]
Proverbe 1911 Fahalavoan' ankizy ka mbola be no ho sisa . [Rinara 1974 #1051]
Proverbe 3030 Lambo mandom-boara : miraingiraingy amin' ny ho hanin' ny ankizy . [Rinara 1974 #1720]
Proverbe 3153 Lehilahy mahery mihosy , vehivavy mahery manetsa : ka sady voky ny ankizy no tsy ory ny lehibe . [Rinara 1974]
Proverbe 3193 Lokan' ankizy , ka izay azo dia hanina . [Veyrières 1913 #2381]
Proverbe 3327 Maina tsy azo diasana, hoatry ny fia-parin' andevolahy . [Veyrières 1913 #560]
Proverbe 3346 Maka kitay manana ankizy ; afo manan-jiro ; homa-maizina ao am--pototry ny mazava . [Veyrières 1913 #2296, Houlder 1895]
Proverbe 3740 Mandry tsirangaranga ny be trosa , fa raha maneno ny akoho dia fohazin' ny ankizy hoe : Andrao tran' ilay olona hianareo! [Rinara 1974 #2088]
Proverbe 4026 Miadana ory tahaka ny ankizilahy homan-kerotra . [Rinara 1974 #2230]
Proverbe 4054 Miangaly miserana tahaka ny ankizilahy misorona afo alozina . [Rinara 1974 #147]
Proverbe 4055 Miangaly miserana, toy ny andevolahy mizaha lanonana , fa raha tonga maka kitay . [Veyrières 1913 #570]
Proverbe 4536 Mody amy ny laoniny, ohatra ny andevolahy verin-trosa . [Cousins 1871]
Proverbe 4756 Nahoana no saro-po manan' anaka : sao tsy manandray ny ankizy ? [Rinara 1974]
Proverbe 4963 Ny ankizy no manao tsingeringerina , ka ny lehibe no fanina. [Houlder 1895 #1924, Cousins 1871, Veyrières 1913]
Proverbe 4964 Ny ankizy no tia tsapa fatana , ny ray aman-dreny no tia tonotono . [Rajemisa 1985]
Proverbe 5219 Ny kibibibiby dia ny ankizy ihany no matahotra , fa raha tena biby dia mihararetra koa ny lehibe . [Rinara 1974]
Proverbe 5257 Ny lamokan' atodiakoho no tsy nomen' ny vaventy ny ankizy dia fanariana dia ny rariny . [Rinara 1974 #3070]
Proverbe 5491 Ny saina toy ny hady : marivo loatra itsambikinan' ny ankizy , lalin-doatra mamandrika ny tena . [Rinara 1974 #3235]
Proverbe 5981 Rafotsibe mivaro- boanatsindrana : ny antoandro ifandrombahana amin' ny ankizy , ny alina ifandrom-bahana amin' ny voalavo . [Rinara 1974 #3518]
Proverbe 6246 Rangahy maty vady : finareta ry rakibo , fa raharahan' ny ankizy ny sisa . [Veyrières 1913 #891]
Proverbe 6728 Tahaka ny katsaka: izay iainana misy ta-hanimba avokoa : maitso , hanin’ ondry ; mibaby , ian-tsampazan’ ny alika ; main-dambana , itomanian’ ny ankizy . [Cousins 1871 #2959]
Proverbe 7114 Toy ny andevolahy miandry faty : izay mahery vava ihany no amboninjato . [Veyrières 1913 #593, Cousins 1871]
Proverbe 7491 Tsy ireo ankizy ireo no mivady , fa isika vaventy . [Veyrières 1913 #1480]
Proverbe 7979 Valabalaka hoatry ny andevolahy homan-goaika . [Veyrières 1913 #602]